Redmi Archives — Anycall Mobile
အသစ်ထွက်လာတဲ့ Redmi K30S မှာဘာတွေများထူးထူးခြားခြားပြောင်းလဲသွားလဲ??
အားလုံစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ Redmi K30S ကတော့ တရုတ်မှာ တရားဝင်ထွက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ။ ဒီ K30S ဟာဆိုရင် K30 Series ရဲ့ နောက်ဆုံးအပိတ်ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တဲ့အတွက် နောက်ထပ် K30 ဖုန်းအသစ်တွေကိုတော့ တွေ့လာရတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ လက်ရှိ K30 Series ထဲမှာ …
K30S နဲ့ပတ်သက်ပြီး အရင်ကတည်းက Leaked သတင်းအစုံထွက်ခဲ့တာကို စာဖတ်သူအားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ အခုမှာတော့ ဒီ Redmi K30S ရဲ့တရား၀င်မိတ်ဆက်လာမယ့်ရက်ဟာ Weibo မှာ‌ထွက်ပေါ်လို့လာခဲ့ပါပြီ။ Weibo ပေါ်က Post အရ Redmi K30S ဟာ…
Redmi ရဲ့ ပထမဆုံး 108MP Camera Phone ဖြစ်လာမယ့် Redmi Note 10 Pro
Xiaomi အနေနဲ့ လာမယ့် November လအတွင်းမှာ Redmi Series အတွက် ဖုန်းအသစ်တွေကိုထုတ်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့ Xiaomi Mi 10T Series ကိုမှ တရုတ်မှာ K30T Series အဖြစ်ထုတ်လာဖို့ရှိနေပြီး နောက်ထပ်…
K30T Series အဖြစ်နဲ့ တရုတ်ဈေးကွက်မှာတွေ့ရမယ့် Mi 10T Series
စက်တင်ဘာ၃၀ ရက်နေ့တုန်းက Xiaomi အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ Xiaomi Mi 10T series ကို Global ဈေးကွက်အတွက်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Series ဟာ တရုတ်မှာတော့ ဘယ်လို နာမည်နဲ့ မိတ်ဆက်လာမလဲ မသိရသေးပေမယ့်…
Redmi ချစ်သူတို့အတွက် Mi Watch Lite ဒါမှမဟုတ် Redmi Watch
၂၀၁၉ နို၀င်ဘာလလောက်တုန်းက Xiaomi အနေနဲ့ ဈေးနှုန်း ၂ သိန်းခွဲ၀န်းကျင်သာရှိတဲ့ Mi Watch ကို တရုတ်မှာစတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။ အခုမှာ‌ေတာ့ Mi Watch Lite ဖြစ်လာနိုင်တ‌ဲ့ Watch တစ်ခုUL (Demko) Authority…
Redmi Note 10 Series ကိုတွေ့လာရတော့မယ်
ဒီလအစောပိုင်းလောက်တုန်းက Model နံပါတ် M2007J22C ရှိတဲ့ Xiaomi ဖုန်းတစ်လုံး China MIIT Authority မှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ ဒီဖုန်းဟာဆိုရင် Redmi Note 10 5G လို့အားလုံးကခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ အခုမှာတော့ Model နံပါတ်…
Snapdragon 875 Chip နဲ့ထွက်လာမယ့် Redmi K40 Pro
(Unicode) Apple အနေနဲ့ ကမ္ဘာ့ပထမဆုံး 5nm Chip ဖြစ်တဲ့ Apple A14 Chip ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီးနောက် ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီတော်တော်များများဟာ သူတို့ရဲ့ Android Flagships ဖုန်းတွေမှာ Qualcomm ရဲ့ 5nm Flagship…
Redmi ရဲ့ ပထမဆုံး Neckband Wireless Earphone ထွက်ရှိလာ…
မနေ့ကတုန်းက Redmi ဟာ Bluetooth Wireless Earphones အသစ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Redmi Sonic Bass Wireless Earphones ကို နီပေါမှာမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Redmi Sonic Bass Wireless Earphone ဟာRedmi…
Redmi Note 10 တဲ့ ဘာတွေများဆန်းလာဦးမလဲ??
September 2, 20202Mins Read
Xiaomi အနေနဲ့ ဈေးကွက်ထဲမှာစမတ်ဖုန်းတော်တော်များများကို မိတ်ဆက်ထားတာကိုစာဖတ်သူတို့ အားလုံးသိပြီးဖြစ်မှာပါ။ နောက်ထပ် Mi 10T Series ကိုလည်း ထုတ်လာဖို့ သတင်းတွေထွက်ထားပါတယ်။ Mi 10T Series ကတော့ Flagship ဖုန်းတွေအနေနဲ့ထွက်လာမှာပါ။ အခုမှာလည်း Xiaomi…
မထင်ထားလောက်တဲ့ Specs တွေနဲ့ ပွဲထွက်လာပြီဖြစ်တဲ့ K30 Ultra
အားလုံးစောင့်မျှော်နေကြတဲ့ K30 Ultra ကတော့ ခုနကလေးတင်ပဲ တရား၀င်ထွက်ရှိလို့လာခဲ့ပါပြီ။ K30 Ultra နဲ့ အတူတူပွဲထွက်ခဲ့တဲ့ Mi 10 Ultra ကတော့ Mi 10 Pro နဲ့ လုံး၀မတူတဲ့ အချက်တွေရှိလာခဲ့ပေမယ့် အခု…
120Hz AMOLED Display နဲ့ ထပ် Kill ဦးမှာလား K30 Ultra ရေ??
လက်ရှိ K30 Series ထဲမှာဆို K30 ၊ K30 5G ၊ K30i 5G ၊ K30 Racing ၊ K30 Pro နဲ့ K30 Pro…
Redmi Note 8 Pro ကို Special Edition အနေနဲ့ထပ်တွေ့ရဦးမှာလား ?
August 10, 20202Mins Read
Redmi ရဲ့ Mid Range Killer တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့တဲ့ Redmi Note 8 Pro ကို အားလုံးမှတ်မိဦးမယ်ထင်ပါတယ်။ MediaTek Helio G90T ကိုသုံးထားတဲ့ Note 8 Pro ဟာ…
Redmi9Prime ကို August4ရက်နေ့မှာမိတ်ဆက်လာမယ်…
Redmi အနေနဲ့ August4နေ့မှာ Redmi9Prime ကို အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေမှာ တရားဝင်မိတ်ဆက်လာတော့မယ်လို့ Xiaomi India ကအတည်ပြုလိုက်ပါပြီ။ အခု Redmi9Prime ဟာဆိုရင်Redmi 9…
Band မကြိုက်တဲသူတွေအတွက် Redmi Smartwatch ထွက်လာတော့မယ်..
၂၀၁၉ အစောပိုင်းလောက်တုန်းက Xiaomi ဟာ Huawei က Honor ကို Sub-brand အဖြစ်ခွဲထုတ်သလိုပဲ သူတို့ရဲ့ နာမည်ကြီး Redmi Lineup ကိုလည်း Sub-brand အနေနဲ့ ခွဲထုတ်ကြောင်း ကြေငြာခဲ့ပါတယ်။ …
Redmi K30 5G နဲ့ MIUI 12 Error များအကြောင်း
Redmi K30 5G ဖုန်းတွေမှာ MIUI 12 System Update တင်ရင် ဖြစ်နေတဲ့ error လေးရှိတာတွေ့ဖူးကြလား? MIUI 12 လေး စောစောရလို့ တင်လိုက်မိပါတယ် error ပါလို့ စိတ်ညစ်နေရတယ်…
OnePlus 8T Review : Flagship Enough??
MX Player မှာ Background Music ဖွင့်မရရင် ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ?
Huawei Nova 8SE ရဲ့ Specs အပြည့်အစုံထွက်ပေါ်လာ…